आईएमई लाइफको दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाइयो
काठमाडौं (अस) । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आइतवार दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कम्पनीले आव २०७५/७६ मा रू. ९१ करोड बीमा शुल्क संकलन गर्न सफल भएको जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. रामहरि...
चेम्बर र साउदीका लागि नेपाली राजदूतबीच छलफल
काठमाडौं (अस) । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आइतवार साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र सिंहसँग साउदी अरेबियासँग लगानी, व्यापार, श्रम र आर्थिक अभिवृद्धिका विषयमा छलफल गरेको छ । चेम्बर सचिवालयमा भएको छलफलमा राजदूत महेन्द्र सिंहले दूतावासको पहलमा नेपालबाट व्यापारिक प्रतिनि...
विद्युतीय सवारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया
काठमाडौं (अस) । सुन्दर यातायातले विद्युतीय सवारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार महासंघ (नाफिज)को सहकार्यमा आइतवार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी कम्पनीले विद्युतीय सवारीको जानकारी, यसका चुनौती र अवसर तथा यसको भविष्य लगायत विषयमा अन्तरक्रियात्मक...
श्री एयरले ल्यायो क्यू ४०० टर्बाेप्रप जहाज
काठमाडौं (अस) । निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्सले थप गर्ने भनेका दुई जहाजमध्ये क्यू ४०० टर्बाेप्रप जहाज आइतवार काठमाडौं आइपुगेको छ । कम्पनीले बम्बार्डियर कम्पनीका दुईओटा जहाज ल्याउने तयारीअनुसार पहिलो जहाज ल्याएको हो । अर्काे जहाज भने १५ दिनभित्रमा...
२ अर्बको ट्रेजरी बिल विक्री गर्दै राष्ट्र बैंक
भदौ १, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार रू. २ अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री गर्ने भएको छ । आइतवार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बोलकबोल प्रक्रियाबाट ट्रेजरी बिल विक्री गरिने जानकारी गराएको हो । ९१ दिने अवधिको उक्त ट्रेजरी बिल आगामी मङ्सिर ३ गते परिपक्व हुने...
१४औं नाडा अटो शोको सम्पूर्ण तयारी पूरा, १६० ओटा स्टल र ब्लक रहने
भदौ १, काठमाडौं । अटोमोबाइल क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मेला नाडा अटो शोको १४औं संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी भदौ १० गतेदेखि राजधानीमा सञ्चालन हुने उक्त मेला सम्बन्धी जानकारी गराएको हो ।
अढाई करोड लगानीमा निजगढमा होटल हेभेन सञ्चालन
भदौ १,बारा । बाराको निजगढमा एक युवा व्यावसायीको करीब रू.२ करोड ५० लाख लगानीमा एक होटल सञ्चालनमा आएको छ । निजगढ–७, लिच्चीटोलमा रहेको होटेल हेभेन आइतवार एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको छ ।
उक्त होटलको निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेश कुमार खनाल र उपमेयर लिलादेवी लामिछानेले...
भदौ १, काठमाडौं । लगातार उकालो लाग्दै गएको सुनको मूल्यमा आइतवार सामान्य गिरावट देखिएको छ ।
शनिवार प्रतितोला रू.७१ हजार ५०० मा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आइतवार प्रतितोला रू.५०० ले घटेर रू. ७१ हजार कायम भएको नेपाल सुन चाँ...
इन्टरस्कार्फ सेफ्टी ट्रेनिङ सोलुशन सञ्चालनमा
काठमाडौं (अस) । काठमाडौंको वसुन्धरामा इन्टरस्कार्फ सेफ्टी ट्रेनिङ सोलुशन प्रालि सञ्चालनमा आएको छ । बेलायतका विभिन्न तालीम प्रदायक संस्थाबाट मान्यता प्राप्त उक्त ट्रेनिङ सेन्टरले अन्तरराष्ट्रियस्तरको तालीम प्रदान गर्ने बताइएको छ ।
सल्यानमा टेलिफोनको दुर्दशा
सल्यान । सल्यानका करीब ९५ प्रतिशत नागरिक टेलिफोन सेवाको पहुँचमा भएको तथ्यांक छ । तर पनि वर्षायाम शुरू भएसँगै जिल्लाकै बनगाडकुपिण्डे नगरपालिका र कालीमाटी गाउँपालिकाका स्थानीयले ढुक्कसँग फोनमा कुरा गर्न पाउँदैनन् ।